Apple keyword rarama | Ndinobva mac
Tevedza pano iyo Apple kiyi yekutaura isu tatova kurarama
Urarame Blog Unganidza kutenderera: iOS 12, iPhone Xs uye Apple Tarisa 4
Tangori maminetsi mashoma kubva pakutanga kweshoko rakakosha uye zvakakosha kuve nenzvimbo kwaunogona kuteedzera nhau dzekuti vakomana veCupertino varipo vanogara. Ndosaka tichida kuti iwe ugovane nesu chiitiko ichi chikuru uye kuti iwe unogona zvakare share nesu mazano ako uye makomendi nezve izvo zvavari kutiratidza.
Saka ingouya nekunakidzwa. Kubva pachinyorwa chimwe chete ichi ivo vachange vaine Coverit inoshanda kuona muSpanish nhepfenyuro yechiitiko chinotarisirwa kwazvo chegore, chirevo chikuru cheiyo iPhone nyowani. Zvese zvinoratidza kuti gore rino tichava nemhando nyowani nhatu dze iPhone, asi Tichaona izvi mumaminetsi mashoma apo Tim Cook anotora danho.
Sezvaunoziva, hurukuro inokosha inobatwa pamuzinda weApple, Apple Park uye mukati meSteve Jobs Theatre. Ichi chiratidzo cheApple chivakwa chakazogumisira kutora gore rapfuura iPhone X mharidzo, mharidzo yaive yechokwadi kune vese vashandi veApple, CEO wazvino Tim Cook uye vamwe vashandisi vekare sezvo Zvakayeuchidzwa kuti zvese izvo Apple nhasi zvaive nekuda kwekuedza uye kuda kwaSteve Jobs.
Gore rino chirevo chekutanga chinogona kurasikirwa nemanzwiro aakatanga nawo gore rapfuura, asi zviri pachena ndezvekuti Apple ine zvakawanda zvemidziyo yekutidzidzisa masikati ano uye tese tine shungu dzekuona nhau dzavanotiratidza uye Kana runyerekupe rwese rwatave kuverenga nekuona mavhiki aya ichokwadi yapfuura. Zvitore!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tevedza pano iyo Apple kiyi yekutaura isu tatova kurarama
Midhiya inoti hatisi kuzoona maAirPod matsva uye neAirPower base mune ino hurukuro